China Mitsubishi Q170MCPU-S1 Machine Diaper Baby 600 pcs / min Manisa ny mpamaky sy ny mpamatsy | GACHN
Manaraka amin'ny Device:
Bokotra, Circuit Breaker, Fifandraisana, Relay, Thermostat, Famindram-pahefana sy ny sisa Schneider, Omron na Honeywell
Fifehezana ny programa / Motion Controlling PLC Mitsubishi Q170MCPU-S1
Modely Fanitarana) Q52B + QX41-S1 + QY41P
HMI 10.4 Toeram-pandehanana miloko Mitsubishi GT2310-VTBA
Photo Electricity, Fibre-optika, loko loko Omron, SICK, OPTEX na Banner
Ny rafi-pitaterana servo Mitsubishi MR-J4B
Rafitra fanaraha-maso ny hafanana Omron
Karatra PLC mitondra fiara mamolavola ny tenany, mampiasa singa elektronika nafarana
Taorian'ny tolotra Sales:
1- Fanomezana antoka iray kalitao sy fanohanana mandritra ny herintaona.
2- Homena tapany maimaim-poana raha toa simba ny milina mandritra ny vanim-potoana.
3- Taorian'ny vanim-potoanan-tsarimihetsika dia omena miorina amin'ny fiampangana sasany ireo ampaham-banga ho an'ny fanoloana.
Mora ny hampiasa ilay milina, miaraka amin'ny motera servo sy panel hodi-maso PLC, izay afaka manitsy ny mari-pana fonosana, ny hafainganam-pandehan'ny fonosana ary ny halavan'ny fika araka izany. Ity milina ity dia mampiaiky ny famolavolana elektrika maivana, miaraka amin'ny fiasan'ny rafitra fanairana error alarm ary marika torolàlana fiarovana.
Ny fitenin'ny tontolon'ny lamba hikasika dia mety ho namboarina manokana hoy ny mpividy.
Isan'ny fanisana sy fanamafisana: miorina amin'ny 550pcs / min, ny hafainganam-pandehan'ny max ≤600pcs / min.Ny famoahana fiara mifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina fonosana, ary ny hafainganam-pandeha an-tsokosoko: 25-45pcs, ny asa tokana tokana dia ny 15 ora / min; 10-24pcs, ny asa fanamafisana tokana dia ny 20 ora / min.
Mifandraisa tsara amin'ny vokatra tokana aorian'ny fahatapahana ny diaper amin'ny zaza na ny mpanam-basy vita amin'ny diaper amin'ny olon-dehibe, tsy misy toe-javatra hafa handefasana na latsaky ny fandefasana vokatra ao amin'ny ravina fanisana.
feno milina diaper servo zaza,
milina diaper mandeha ho azy
Servo feno milina zaza diaper mihintsana pa ...
Gachn hafainganam-pandeha zaza diaper Machine / zaza dia ...
GM-085N Zotra famokarana diaper zazakely L3.6mÃ — W3.3 ...